Ngaba iiFomu zeNkokeli zifile? | Martech Zone
Impendulo emfutshane? Ewe.
Ubuncinci ngokwesiqhelo, kwaye "ngokwesiko" sithetha ukufuna ulwazi lweendwendwe ngaphambi kokuba ubonelele ngexabiso, okanye usebenzise umxholo ongashukumiyo njengenkuthazo.
Masibuyisele ilori kwimvelaphi ethile:
Kumsebenzi wethu wokunceda abathengi bandise uguquko lwabo kwi-Intanethi, siqaphele ukwehla okungagungqiyo, ngokungaguquguqukiyo kubakhenkethi bewebhu abazalisa iifom zemveli zokukhokela. Kukho isizathu esihle soko.
Ukuziphatha komthengi kuyatshintsha, ikakhulu ngenxa yokuba itekhnoloji, ulwazi kunye nokunxibelelana okufumanekayo kubo kugcina ukutshintsha kunye nokubumba kwakhona isimilo sabo.
Nje ngeziphumo, abathengi bakho bakhule baba nolwazi ngakumbi, baqonda, bafuna ngenkani, kwaye baphazamiseka. Lilonke, zikho ngokungathandekiyo ngokupheleleyo ngomxholo ongapheliyo ehlala iphoswa luphawu ekubetheleleni iimfuno, umdla, okanye apho bakho kuhambo lokuthenga.
Umxholo ovaliweyo osebenze kakuhle kungekudala (sijonge kuwe, amaphepha amhlophe kunye neencwadi) ngoku zizinto ezikhuthazayo zokufumana ulwazi lomntu.
Ukuba u cinga ngewebhusayithi yakho njenge intengiso yedijithali rep (njengoko kufanelekile), umxholo we-static ofafazwe ngeefom zokukhokela ufana nomthengisi othengisa ingxoxo, uvakala ngathi irekhodi elaphukileyo, kwaye ahambise isandi esifanayo sokungeva nakweyiphi na into ewela indlela yakhe. Thelekisa oko kunye nomthengisi ophendulayo obuza imibuzo, emamele, kwaye ahambise iimpendulo eziluncedo. Umntu ongakhunjulwa njengomthengisi oshushu, kodwa njengomcebisi othembekileyo kunye nothetha kakuhle. Yiloo nto umxholo onxibelelanayo unokuhambisa.
Ngaba ukusebenzisana kuyasebenza ngokwenene?
Cinga ngezi ziphumo:
Umxholo osebenzayo uvelisa iinguqu ezingama-94% ngaphezulu imvelaphi
Umxholo osebenzayo uvelisa i-300% yokunxibelelana kwabathengi okuphezulu imvelaphi
Umxholo osebenzayo uvelisa i-60% ephezulu yokugcina ulwazi. imvelaphi
Umxholo osebenzayo uvelisa i-500% yedatha eqokelelweyo. imvelaphi
Izizathu ezibini sifuna uxinzelelo:
Ulwazi olulungelelaniswe kwiminqweno yam kwaye apho ndikwinkqubo yokuthenga luya kuhlala luhleli, "ukubamba konke" umxholo owenzelwe ukukholisa wonke umntu, naphina. (Sonke siyayazi ukuba ukuzama ukukholisa wonke umntu kuyasebenza. Ayenzi njalo.)
Iingcali zenzululwazi zisixelela "ingqondo ephindaphindayo”(Isiteketiso senxalenye yengqondo eqhuba isimilo esingabikho zingqondweni kunye nelizwi lokugqibela kwizigqibo) kakhulu ezibonwayo, kunye nomxholo oswele imvuselelo ebonakalayo ayisebenzi kangako.
I-anecdote encinci yokuxhasa eli nqaku lokugqibela: Sakhe savavanya umthengi nge-infographic ngokuchasene nephepha elimhlophe, nganye ihleli ngasemva kwifom ekhokelayo. Iphepha elimhlophe lifumene uguquko olungenanto, ngelixa i-infographic ivune i-100% yokungeniswa. Ngaba ufuna ukuba ubuchopho obuphindaphindiweyo buthabathe inyathelo? Yenza umxholo wakho ubonakale unyanzelekile, ngenxa kaPete.
Ityala lokulahla indlela ephelelwe lixesha asikokubulala iifom zizonke, kodwa ku sudge abathengi kumava asebenzisanayo eyakha ukuthembana kunye nokuzisa ixabiso ngaphambi kokuba ubacele ukuba bazibophelele ngakumbi njengokwabelana ngolwazi lwabo loqhakamshelwano. (Kanye njengokuba unokuziphatha kumhla ukuba unethemba lokufumana umhla wesibini.)
Loluphi uhlobo lomxholo onxibelelanayo onokukwenza oko?
Imizekelo umxholo wee-interactive ziquka:
UMcwangcisi woTyumbo -Mema amathemba okuvavanya amanqaku e-drive-drive okanye izibonelelo ngokuseta idinga
U vavanyo -Yondeza kwiimfuno zakho, kwaye unike iingcebiso eziluncedo
Calculators -Nceda abathengi ukujonga ixabiso
ncokola -1: 1, uncedo lwexesha lokwenyani kanye njengomthengi kuvavanya ukuthengwa
Indlela yesiqhelo / iiPromos Izixhobo zokwenza ngokwezifiso, iingcebiso okanye izithembiso ezisekwe kukhetho lomthengi, imbali, okanye ukuthengwa koontanga
Ukujonga kwangoko -Susa imiqobo yokuthenga ngokucacisa ukuba bangathenga ngoku
Ukuphumelela kwangoko - Dibanisa izikhuthazi kunye nomdla
I-infographics esebenzayo -I-infographics enezinto ezisebenzisanayo ezinjengokushukuma kunye nezinto ezifunwayo njengeepaneli zolwazi okanye iividiyo
Bhatala nge-tweet / ngesabelo sentlalontle -Vuza iindwendwe ngokufikelela xa babelana ngomxholo wakho kunye nenethiwekhi yemidiya yoluntu
kwakha -Vumela iindwendwe zivavanye kwaye zibonise ulwazi lwabo
Ibali leMicrosites Ii-microsites ezikwi-Intanethi ezihambela undwendwe ngamaphepha kunye neevidiyo ukuya kuguquko
Trivia - Banelise umdla wabo wokufuna ukwazi kwaye ubonise ukuba bayazi kangakanani
yokuzonwabisa -Bonisa vs. uxelele
Xa ucwangcisa umxholo wakho wokunxibelelana, kuluncedo ukugcina engqondweni abaqhubi bengqondo isenzo sokundwendwela amafutha kunye nokusetyenziswa komxholo. Apha ngezantsi sidwelisa ezimbalwa, ezibolekwe kubahlobo bethu kwi Iifom zeNkokeli zifile:
Ngaba isadidekile ukuba ingaba injani na le nto xa isebenza? Nantsi isikhokelo esifanelekileyo, onokuthi "uhlawule ngetwitter" ukuze ufumane incasa yendlela yokusebenzisana ekhokelayo.
Jonga isikhokelo sokunxibelelana
Ngaphambi kokuba sahlukane ngeendlela, ndifuna ukwazisa kwaye ndinike inyani ephezulu ezintlanu kubaxumi bethu kwaye amaqabane omxholo osebenzisanayo-Muhammad Yasin kunye noFelicia Savage kwi-PERQ. Iqela labo liphuhlise umxholo omnandi, osebenzayo wokuguqula iwebhusayithi yakho ibe ngumthengisi wedijithali, ekufuneka uyenzile phuma kunye nedemo, yomthetho.
Cela iDemo yeSoftware yokuNxibelelana noMxholo
Zeziphi iintlobo zomxholo wokudibana, ukuba zikhona, okhe waba nazo? Zithini iingcinga zakho ukuza kuthi ga ngoku? Yabelana ngezantsi kwaye masincedane.
Ukwazisa: I-PERQ ngumthengi wethu Nkonzo.
tags: UkuThengiswa kweMpahlaumxholo wee-interactiveisoftware yokusebenzisanaiintlobo zomxholo ezisebenzisanayoamava adibeneyoiifom zokukhokelaiifom zokukhokela zifileI-PERQ